ILondon njengezithandani | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | London, Ezothando
Lesi sikhathi sonyaka yisikhathi esihle kakhulu sokuvakashela inhlokodolobha yamaNgisi. Idolobha lijabulela isimo sezulu esihle futhi njengoba kwenzeka njalo emadolobheni anesibhakabhaka esimpunga nesiphepho isikhathi esiningi sonyaka, lapho ilanga likhanyisa izakhamizi zalo ziyavela futhi zijabulele imfudumalo yalo.
Uhambo, amadina, udabula amapaki nezinqaba, imibukiso, imikhosi. ILondon inikeza okuningi unyaka wonke futhi uma nihamba njengombhangqwana ungahamba ucabange futhi ukhethe okunye ikakhulukazi imisebenzi yothando, zalabo abashiya izithombe zingalibaleki njengamakhadi eposi othando. Akukho oda kusuka kokuhle kuya kokubi kakhulu ohlwini lwethu ngakho-ke bheka bese uzakhela okwakho.
1 Inyoka Lido
2 I-venice encane
4 Isiteshi iSt. Pancras
5 Ukugibela Amahhashi eHyde Park
7 ISt. Paul Cathedral
8 Izidlo zakusihlwa zothando, ama-toast namathi
Kuse-hyde park futhi abantu bendawo bakujabulele ukugibela okungenani ikhulu leminyaka. Imibhangqwana eminingi iza lapha ngeMigqibelo, bafaka izinyawo zabo emanzini noma bagibele izikebhe ezincane. Futhi uma sekuyisikhathi setiye baya eLide Café Bar.
Kuyinto a ichibi evulwa kuphela ngezimpelasonto kusuka ngoMeyi nezinsuku eziyisikhombisa ngesonto kusuka ngoJuni 1 kuya kuSepthemba 12. Indawo yokudlela inamatafula asechibini ukuze uphuze ikhofi, itiye noma ingilazi yewayini elibomvu. Eduze kuneSwimming Club okuyiyona endala kunazo zonke eNgilandi nalapho abantu babhukuda khona nsuku zonke phakathi kuka-6 ekuseni no-9: 30 ekuseni. Ngisho nasebusika. Futhi, amanzi ahlanzekile ngoba ayahlolwa njalo ngesonto.
Inyoka Yenyoka kuvulwa kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-6 ntambama yize bekuvumela ukuthi ungene kuze kube ngu-5: 30 ntambama. Inentengo ye- 4 amakhilogremu ngomuntu omdala ngamunye yize ngemuva kwe-4pm imali yokugibela yehlela kumakhilogremu we-4. Ukuqashwa kwelanga lounger kubiza u- £ 10 usuku lonke. Ufika kubhubhu wehla esiteshini saseNingizimu Kensington.
Ukuhamba ngothando nokudla kwasemini elangeni, ukuhamba kufanele kube yilokhu indawo ethule ezungezwe yimisele lapho kuhamba khona izikebhe ezinhle. Eduzane nomsele omkhulu kunamakhefi nemigoqo nezindlu eziningi ngesitayela sokwakha iRegency. Kunemisele emibili emikhulu, iGrand Union kanye neRegent's kanye nePaddington's Basin ehlangana ibe yisiziba esikhulu futhi esihle, esisenkabeni yendawo yonke, iBrowing Pond.
Ukuhlala lapha kuyabiza futhi kupholile kodwa ukuhamba kahle kwabavakashi futhi kwabathandanayo, kuhle. Ukuhamba kungahamba kude futhi kushiye iLittle Venice ngezinyawo ukufinyelela eRegent's Park ohambweni oluhle lwesigamu sehora.
Ungathatha futhi isikebhe, iWaterbus, esehla ngomsele siye e-zoo naseCamdem. Ungafika lapho ngepayipi ngokuhla esiteshini saseWarwick Avenue ku-Bakerloo Line.
Uma ungeke uhlale ehhotela futhi uma uhlala efulethini eliqashisayo labavakashi, uzoba nendlu onayo. Ukuthenga okuthengwayo kuyisibopho futhi ungasebenzisa ngokunenzuzo futhi uthengele umlingani wakho izimbali. Indawo enhle yokuthenga izimbali yi I-Columbia Road Flower Market. Kuphela Kuvulwa ngesonto futhi kuse-East London kodwa kulungile ukuhamba phakathi kwezimbali.
Futhi kunezitolo zakudala, zemibukiso yobuciko nezinye izitolo zezingubo ukuzungeza lapha ukuze ukuhamba kuphelele. Ku-Ezra Street, ngokwesibonelo, ungahlala endaweni yokudlela enhle ebizwa ngokuthi uLily Vanilly bese unambitha amakhekhe akhe ngekhofi noma ngetiye. Kuhle!
Isiteshi iSt. Pancras
Ungahle uzibuze ukuthi luyini uthando ngesiteshi esingaphansi komhlaba kepha kuhlale kunokuthile. Lapha kufihlwa i- ukubaza okuphezulu kwamamitha ayisishiyagalolunye okumele umbhangqwana ukwangana ngobumnene obukhulu. Impela uzodlula kulesi siteshi ngesinye isikhathi ngakho-ke lapho usenza nomfana noma nentombazane yakho bese ume bese Thatha isithombe.
Futhi njengoba ukulesiteshi ungaluqeda uhambo ku Indawo yokuphuzela utshwala yaseSearcys St. Pancras. Ibha ingamamitha angama-98 ubude, yebo, ukufunde kahle lokho, futhi kunikezwa okungenani Izinhlobo eziyi-17 zalesi siphuzo somoya.
Ukugibela Amahhashi eHyde Park
Akunandaba ukuthi ungumgibeli omkhulu noma cha, ungahlala uqasha ihhashi futhi ulakhe ukugibela ihhashi lothando kwelinye lamapaki athandwa kakhulu eLondon. Le sevisi inikezwa lapha unyaka wonke, kubagibeli bodwa abadala noma izingane kanye namaqembu.
Inkonzo ivula iminyango yayo ngo-7: 30 ekuseni futhi ivalwa ngo-5 ntambama, nsuku zonke zesonto. Akukho okuhlangenwe nakho kwangaphambilini okudingekayo ngoba amahhashi azolile kakhulu. Uma uwuthanda lo mbono, ungabheka izimo zezulu ngaphambi nangemva kokwenza ukubhuka nokukhokha online noma ngocingo. Uma ukwenza isikhathi eside ngaphambi kwesikhathi, ungahlala wenza izinguquko ngokwazisa isonto eledlule. Imali ayibuyiswa, kungenjalo.
Akuyona into eshibhile ngoba izifundo zokugibela zibiza umuntu omdala ngamunye Amakhilogremu angu-103 ngehora. Uma ufuna okuthile okukhethekile, kuzofanela ukhokhe amakhilogremu ayi-130. Izinga lifaka amabhuzu, isigqoko nejazi elingangeni manzi. Khumbula ukuthi ngezimpelasonto kunabantu abaningi ngakho-ke kufanele ubhuke ngaphezu kwesonto ngaphambi kwesikhathi.
Ingenye yamapaki asebukhosini futhi lapho ukhuphukela esiqongweni segquma unombono omuhle ngeLondon. Ngentwasahlobo ipaki ligcwele izimbali, linamakhambi, izimbali zasendle, ama-orchid, futhi uma unesithakazelo emlandweni wezasolwandle iqukethe i-Old Royal Naval College neNational Maritime Museum.
Futhi angikutsheli uma izihlahla zayo ezincane ezinezimbali ezibubende seziqhakazile namacembe awo awela ezindleleni nasemabhentshini. Kuyinto enhle!
ISt. Paul Cathedral
Isonto lihlale lithandana uma inhloso yakho ukuba nobuhlobo "obungcwele". Futhi leli bandla elithile lihle kakhulu ngakho ungakwazi ukukhuphuka ngenhliziyo yakho uhhafu uye phezulu kwedome, Izinyathelo ezingama-259, futhi ucabanga ngeLondon yenza ukuhleleka kwesandla sakho ...
I-cathedral ifinyeleleka kalula njengoba inesiteshi sayo semetro. Kuvulwa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusuka ngo-8: 30 ekuseni kuye ku-4: 30 ntambama bese ukungena kudome kubiza amakhilogremu ayi-18.
Izidlo zakusihlwa zothando, ama-toast namathi
Uma uthanda ukuphuma nemigoqo nomfana / intombazane yakho ungahamba uzungeze yena Connaught Ihhotela. Ibha yayo ikona eliyimfihlakalo futhi eliyimfihlo ozolithanda. Uma ungomunye walabo abakhetha udle ngemibono ye-panoramic lapho-ke iSearcy's Restaurant eGherkin iyona ehamba phambili, nengqamuzana layo lengilazi eliqaqa isibhakabhaka nedolobha lize.
Uyawuthanda umqondo wopende ngokujwayelekile inkantini yaseBrithani? Yebo ukunikezwa kuningi kepha eClerkenwell kukhona ifayela le- Inkantini yeFox & Anchor, ngemenyu yayo elula futhi emnandi, i-100% yaseBrithani. Ekugcineni, a Ihora lesi-5 itiye Ungayinambitha cishe kunoma yiliphi ikhona laseLondon (ngaphakathi kwamahhotela asezingeni eliphakeme kakhulu noma naseHarrod's bakhonza okungcono kakhulu).
Uzibuza ukuthi sikuphi isithombe esiqala okuthunyelwe okuvela kuso? Lifihlwe kuphi lelo gquma elihle lamaNgisi? Yi- I-Richmond Hill, enyakatho yoMfula iThames, uzungeze isigodlo saseRichmond nepaki elinegama elifanayo. Lo mbono omuhle ungatholakala kusuka eTerrace Walk, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » London » ILondon njengezithandani
Amathiphu nezizathu zokubopha ubhaka